Sivy andro sisa ho an’ireo kandidà: hanao ranolava ny fanaterana dosie eny amin’ny HCC | NewsMada
Sivy andro sisa ho an’ireo kandidà: hanao ranolava ny fanaterana dosie eny amin’ny HCC
Hifarana ny 21 aogositra izao ny fe-potoana farany ahafahan’ireo kandidà mametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina. Hanao tohivakana izany , manomboka amin’ity herinandro ity. Fito ireo efa nahavita izany, hatreto.
Nanome toromarika. « Tsy tokony hiandry fotoana farany ireo kandidà vao hanatitra izany satria tsy misy azo atao intsony raha misy tsy mety ny antontan-taratasy momba azy ireo », hoy ny lehiben’ny mpirakidrahara eo a nivon’ny HCC, Ambohidahy, ny faran’ny herinandro teo. Efa fomba mahazatra fanao eto amintsika rahateo ny miandry fotoana farany. Na izany aza, tombanana fa mety hanao ranolava amin’izao herinandro izao ireo hanatitra ny antontan-taratasy filatsahany. Efa nanambara ny hanao izany ny eo anivon’ny PLD, amin’ny alalan’ny kandidàny, Rabeharisoa Saraha. Tahaka izany koa ny kandidà Ravalomanana Marc. Anisan’ny efa nanambarana ny maha kandidà azy ary efa hanatitra ny azy ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky. Raharimanana Patrick avy amin’ny Vitantsika, ny MTS Ratsiraka Roland. Tahaka izany koa, i Jose Vianey sy ny kandidà Raharimanana Mamy avy amin’ny Maeva. Anisan’ny andrasana koa ny an’ny filoha amperinasa, Rajaonarimampianina Hery.
Fito ireo efa nanatitra ny antontan-taratasy filatsahany
Tsiahivina fa fito ireo efa nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiny, hatramin’ny zoma teo. Anisan’izany, Rajoelina Andry atolotry ny TGV. Ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo Jean, natolotry ny Aba. Ny pasitera Mailhol avy amin’ny GFFM, ny filohan’ny SMM teo aloha,i Ernaivo Fanirisoa avy amin’ny Zama. Ny kandidà Jules Etienne Roland natolotry ny Mafi. Rasolofondraosolo Zafimahaleo (Dama) Mahaleo kandidàn’ny Manajary Vahoaka ary Rabary Andrianiaina Paul, natolotry ny Miasa.
Araka izany, tombanana fa tsy hihoatra ny 20 ireo kandidà hofidina filoham-pirenena amin’ity indray mandeha ity, raha 33 izany tamin’ny taona 2013.